Ukuphupha ngeCello Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
I-cello yeyosapho lwezixhobo zomtya. Igama lokwenyani ngu «cello» kwaye livela kwi-Italiyane. Oko kuthetha into efana ne "fiddle encinci", ifiddle encinci. Igama elithi bass violin okanye i-bass violin liyaziwa, nangona i-cello yenziwe ngokufana ne-violin, kodwa amaxesha amaninzi amakhulu kunokuba kunjalo. Yenziwe ngumenzi wevayolin, kodwa oku kuthatha amaxesha amathathu ubude ukwenza esona sixhobo sincinci.
Kwi-orchestra yeklasikhi, i-cello idlala ivayolini yesibini yomzekeliso, kuba sisixhobo sesibini esikhulu somtya emva komntakwabo omdala, ibass ephindwe kabini. I-cello yenziwe ngomthi kwaye isandi esimtyibilizi ngokumangalisayo nesomphefumlo senziwe ngoomatshini, Oko kukuthi, ngokuxhwitha okanye ukupeyinta umtya ngesaphetha. Uyayidlala ehleli, ngamadolo exhasa i-cello kumacala omabini. Intamo yentsimbi isegxalabeni lasekhohlo ngelixa udlala, ukuze umntu odlala iselfowuni akwazi ukudlala xa ehleli phantsi.
Kuba i-cello sisixhobo esingenantambo esinomtya, iselfowuni kufuneka igcine iminwe yamanqaku ahambelana nayo okanye inesiphiwo sokudlala ngendlebe.
Amaphupha kaCellot ngokuqinisekileyo aphakathi kunqabile, kodwa apha nakutolikwa kwamaphupha kunento eyithethayo ngayo.
1 Uphawu lwephupha «cello» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Cello» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Cello» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «cello» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu uphupha i-cello, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kulibona njengophawu oluqinisekileyo, nokuba nini imiqondiso yethamsanqa phakathi. Apha unokulindela amava okuthandana, apho unokufumana amandla kwezinye iinkalo zobomi.
Mhlawumbi wena ngokwakho udlala i-cello kumaphupha akho, emva koko unokulindela iindaba ezilungileyo ngokubanzi kungekudala. Le meko yamaphupha iyeza, ixesha lokuvuya ifakiwe.
Uphawu lwephupha «Cello» - ukutolikwa kwengqondo
Umculo uyakwazi ukuveza iimvakalelo kunye nokuvusa iimvakalelo kuthi ngaphandle kwamagama. Umculo uhlala usithi lulwimi lomphefumlo wethu. Oku kuyinyani ngakumbi kwicandelo le- uthando.
Isimboli yephupha 'cello' inobudlelwane obusondeleyo kule nto kwaye ihlala isetyenziswa njengophawu lwe ubufazi ijongiwe. Ukuba umntu uphupha ngokudlala i-cello, lo ngumnqweno womanyano lomzimba kunye neemvakalelo oluye lwabonakala ephupheni.
Wakho isini Umxholo womfanekiso wephupha "cello" wenziwe ngokucacileyo. Ibanjwa njani i-cello bow? Ngaba ityibilika ngokutyibilikayo nanjengompefumlo phezu kwemitya, okanye ngaba itsibela isixhobo ngokukhawuleza? Oku malunga Umdla y Ukunikezela Kwaye kwimeko, inokubonisa imeko yobomi bakho bobulili.
Ngaba kukho ukungangqinelani okanye ngaba kukunxibelelana ngemvisiswano umntu athanda ukukuva? Ukuqwalaselwa ngqo komsitho wephupha lakhe kunokuba kubaluleke kakhulu ekutolikweni kwephupha kwaye kunika umphuphi ithuba lokuba azi ngakumbi ngesini sakhe kwaye ngenxa yoko nendima yakhe njengowasetyhini okanye indoda.
Uphawu lwephupha «Cello» - ukutolika kokomoya
Imifanekiso efana nephupha le-cello ikwangumqondiso el mundo yeemvakalelo kutoliko lokomoya. Apha ikakhulu imele Imvisiswano kunye nokukwazi ukudibana nawe.